कुर्सी स्वार्थको पुरानै संस्कार – eratokhabar
कुर्सी स्वार्थको पुरानै संस्कार
ई-रातो खबर २०७४, १९ पुस बुधबार ०४:३८ January 3, 2018 2159 Views
रातो खबर सम्वाददाता : प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको पनि एक महिना सकिएको छ । खडेरीको काकाकूलझैँ राहत र विकासको तिर्खामा मल्हम लाग्ला भन्ने आशामा सिंहदरबारतिर फर्किएका नागरिकका आँखा टट्टाउन थालेका छन् । एकल सङ्क्रमणीय कि बहुमतीय ? भन्ने जनताका लागि नरर्थक बहस ‘नत्र चिसै पानीले नुहाउँछु’ उखानजस्तै भएर सकिएको छ । माथिल्लो सभाको गठन प्रक्रियाको बहस सकिंदा नसकिंदै नयाँ नयाँ बहस र किचलो सुरु भएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेसलाई कुर्सी छोड्न जति गार्‍हो भइरहेको छ, एमाले गठबन्धनलाई कुर्सीमा टाँसिन त्योभन्दा पनि बढी हतारो भइरहेको देखिन्छ । कांग्रेसमा विधिवत् देखिएको छ भने एमाले गठबन्धनमा अराजकतावाद देख्न सकिन्छ । यी दुई पक्षमा जनतालाई राहत दिनेभन्दा कुर्सीमोह मुख्य विषय रहेको छ ।
चुनाव सकिएसँगै उपभोग्यवस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । आर्थिक र बजार सन्तुलनको मापदण्ड मानिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निर्वाचनयता दुईपटक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । सेवा–सुविधाविहीन करको भारीले नागरिकको ढाड भाँचिएको छ । एकातिर भूकम्पपीडित जनता टहरामा चिसो रात कटाउन बाध्य छन् । अर्कोतिर उनीहरूको नाममा देश र दाताहरूले दिएको रकममा करोडौँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ । पुरानो रजनीति, विचारधारा र पुरानै नेताहरूबाट देशको समृद्धि र स्वाभिमान सम्भव छैन भन्ने कुरा एकपटक फेरि प्रकट भएको अवस्था भोग्न देश बाध्य भएको छ । देशमा निराशा झन् बढ्दैछ ।
बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक अलमलमा कांग्रेसजत्तिक जिम्मेवार एमाले पार्टी छ । सरकारले पठाएकै अध्यादेश पारित वा स्वीकृत गर्नु नै थियो भने झन्डै ३ महिनासम्म अड्काएर राख्नुको औचित्य के हो ? त्यसप्रकारको अड्चनले देशमा पैदा भएको अकर्मण्यता, आर्थिक स्रोत र समयको क्षतिपूर्ति एमालेले गर्न सक्छ ? नैतिकताको मूल्य नभएको समाजमा त्यसको जवाफ दिन आवश्यक ठानिनेछैन । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा शक्ति बाँडफाँड टुङ्गिएको छैन । एमाले गठबन्धनले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको कारण पनि कांग्रेसलाई कुर्सी लम्ब्याउने आधार पैदा भएको छ । सरकारको चाबी हातमा लिएर बसेका प्रचण्ड अहिले पनि दुईओटा डुंगामा गोडा राखेर उभिएका छन् । जसको कारण कांग्रेस अटेरी गरिरहेको छ भने प्रचण्ड बिच्केलान् भनेर ओली डराएका छन् । सत्ता लम्ब्याउने र राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेलमा देउवा सरकार तल्लीन छ । पुराना दल र पुरानै नेताबाट नयाँ सरकारको अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो । त्यही कारण पुरानै खेल जारी छ । सामूहिक रूपमा बिरामी हुने, होटलमा थुनिने, अपहरण हुने पुराना घृणित खेल यिनै नेता र दलले खेलेको जगजाहेर छ । उनीहरूबाट अाक अपेक्षा गर्नै सकिन्नथ्यो । स्रोत :रातो खबर साप्ताहिक, अङ्क २९, पूर्णाङ्क १२४
२०७२ पुस १९ पूर्वान्ह १०ः२५ मा प्रकाशित
नेकपाका मोरङ इन्चार्ज श्रेष्ठ गिरफ्तार